RASMI: Kooxda Chelsea oo dhammaystirtay saxiixa Edouard Mendy – Gool FM
(London) 24 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa goordhow ku dhawaaqday inay dhammaystirtay saxiixa goolhaye Edouard Mendy, kaasoo ay kala soo wareegeen naadiga Rennes.
Xiddiga reer Senegal ayaa qalinka ku duugay heshiis shan sano ah oo uu ku sii joogayo garoonka Stamford Bridge, wuxuuna kula tartami doonaa booska safka hore ee shabaqa Blues labada goolhaye ee Kepa Arrizabalaga iyo Willy Caballero xilli ciyaareedka soo socda.
Qiimaha ay Chelsea kula wareegtay Edouard Mendy ayaa lagu sheegay 22 milyan oo gini.
Kaddib markii uu heshiiskan waqtiga dheer qalinka ugu duugay Blues, goolhaye Mendy ayaa yiri: “Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku soo biiro Chelsea, waa riyadeyda inaan ka mid noqdo kooxdan xiisaha badan, isla markaana aan la shaqeeyo Frank Lampard iyo dhammaan shaqaalihiisa tababarka, waxaan rajeynayaa inaan la kulmo asxaabteyda ma sugi karo inaan bilaabo shaqadeyda.”
28-sano jirkaan ayaan ahayn goolhayihii ugu horreeyey ee Rennes kaga soo dhaqaaqay Chelsea, waxaana ka soo horreeyey Petr Cech oo Blues kaga soo biiray dhinacaas sanadkii 2004.